DFS oo bilowday dhaqan-gelinta qorshaha ay jilbaheeda ku hoos-keenayso Axmed Madoobe -News and information about Somalia
Home Warkii DFS oo bilowday dhaqan-gelinta qorshaha ay jilbaheeda ku hoos-keenayso Axmed Madoobe
DFS oo bilowday dhaqan-gelinta qorshaha ay jilbaheeda ku hoos-keenayso Axmed Madoobe
Dowladda Federaalka ah ayaa waxay si rasmi ah u bilowday dhaqan-gelinta qorshe in muddo ah socday kaasi oo ujeedkiisu ahaa in ay kusoo dabciso Axmed Madoobe, madaxweynaha Jubbaland.
Istaraatiijiyadda oo ah mid heerar kala duwan leh isla markaana aad looga baaran degay ayaa waxaa ugu horeeya baajinta xafladda caleema saarka Axmed Madoobe oo 26-ka bishan loo madalsan yahay.
Si uu u hirgalo qorshahaas, waxaa ay xayiraadyo saartay diyaaradaha tegaya Kismaayo oo ay shuruudo adag ku xirtay.
Shuruudaha ayaa waxaa ugu horeeya in diyaaraduhu soo maraan Muqdisho iyo in ay isa soo diiwaan-geliyaan 24-saac kahor inta aysan u dhoofin magaala madaxda gobolka Jubadda Hoose.
Ahmiyadda ugu weyn ee go’doomintan ayaa ahayd in ay kala shaan-dheyso madaxda ka qeybgaleso xafladda caleema saarka oo la rajeynayo in ay wajiyo mucaaradsan dowladdan ay kasoo muuqdaan.
Dabinkaas waxaa markii ugu horeysay ku dhacay Shariif Shariif Axmed, madaxweynihii hore ee dalka, kaasi oo markii dambe loo ogolaaday in uu u safro caasimadda ku meel gaarka Jubbaland.
Sikastaba ha ahaatee, xiriirka Villa Soomaaliya iyo Jubbaland ayaa mudooyinkii dambe ahaa mid aanan hagaag-saneyn, waxaana dab kusii shiday guushii Axmed Madoobe oo ay dowladda federaalku qaadacday.
Previous articleMadaxweynihii hore Sheekh Shariif oo Saacado lagu xayiray Garoonka Diyaaradaha magaalada Muqdisho
Next articleXOG: Afhayeenka Farmaajo oo guri uu ka iibsaday Ingiriiska ka bixiyey lacago badan
DEG DEG: Ciidamo ka tirsan dowladda oo ku dagaallamay Muqdisho
Saadaq joon oo lacago badan ka dalbaday shirkadaha Forex kuna goodiyay...